Valencia vs Real Madrid… (Dagaalka hoggaanka La Liga oo caawa ka dhici doona Mestalla) – Gool FM - Idman news
Valencia vs Real Madrid… (Dagaalka hoggaanka La Liga oo caawa ka dhici doona Mestalla) – Gool FM
(Valencia) 19 Sebt 2021. Kooxaha kubadda cagta Valencia iyo Real Madrid ayaa ku hardami doona kulan ka tirsan kulammada toddobaadka shanaad ee horyaalka La Liga iyadoo labada naadi ay ku hardamayaan hoggaanka horyaalka dalka Spain.
Labada naadi ayaa min saddex guul iyo hal barbarro helay min afartii kulan ee ay ka ciyaareen La Liga xilli ciyaareedkan taasoo ka dhigan inay haatan min 10 dhibcood leeyihiin.
Naadigii guul gaaray ayaa hoggaanka kala wareegi doona Atletico Madrid oo haatan 11 dhibcood la fadhisa booska koowaad balse ciyaartay shan kulan.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 10:00 Habeennimo xilliga Geeska Afrika.
Garsooraha: Pablo Gonzalez (Spain)
Macallinka hoggaamiya naadiga Valencia ee Jose Bordalas ayaa ka madax bannaan walaac badan oo dhanka dhaawacyada ah, waxaana kaliya safkiisa ka maqnaan doona kaliya hal xiddig waana Denis Cheryshev.
Balse dhinaca kale, dhiggiisa Real Madrid ee Carlo Ancelotti ayaa la tacaalaya xaaladda dhaawacyada ee qaar ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan safkiisa kulanka caawa, waxaana ka maqnaan doona Toni Kroos, Marcelo, Ferland Mendy, Dani Ceballos iyo Gareth Bale kuwaasoo dhammaantood aanan taam u ahayn kulankan.
Valencia ayaa laga dhaliyay ugu yaraan hal gool 18-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay Real Madrid ku wajahday La Liga waana rikoorkii ugu dheeree ee ay shabaqo difaacasho la’aan kulammada ay horyaalka ku wajahdo Los Blancos tan iyo 1995 markaas oo ay la kulantay 19 kulan oo xiriir ah oo aysan shabaqeeda ka difaacan dhiggeeda.
Real Madrid ayaa kaliya hal guul kaga soo gaartay Valenica garoonka Mestalla toddobadii booqasho ee ugu dambeysay, labo barbarro iyo afar guuldarro ayayna kala soo kulantay.
Real Madrid ayaa kaliya hal guul ka gaartay kooxaha ka dhisan Valencia sagaalkii ciyaar ee ugu dambeysay La Liga iyadoo 2-0 ku dhufatay Levante bishii October ee 2020, waxayna kala kulantay shan barbarro iyo saddex guuldarro.
Valencia ayaa guuldarro la’aan ah iyadoo ciyaartay afar kulan xilli ciyaareedkan horyaalka Spain kaddib saddex guul iyo hal barbarro, waxaana rikoorkeedii ugu fiicnaa ee dhibco uruursi ee qarnigan kaddib afarta kulan ee ugu horreysa xilli ciyaareedka.
Los Blancos ayaa haatan guuldarro la’aan ah 22 kulan oo horyaalka La Liga ah, waana guuldarro la’aanta ugu dheer ee haatan kooxaha horyaalkaas kaddib markii ay adkaatay 16 kulan, lix kalena barbarro gashay, sidoo kale waa rikoorkeedii ugu wanaagsanaa tan iyo markii ay 28 kulan guuldarro la’aan ahayd intii u dhexeysay March 2016 illaa January 2017 markaas oo ay gaartay 24 guul iyo afar barbarro iyadoo uu macallin u ahaa Zinedine Zidane.
Previous Juventus vs AC Milan… (Turin oo marti gelineysa mid ka mid ah ciyaaraha ugu xiisaha badan Serie A caawa xilli Bianconeri ay…) – Gool FM
Next Goolhaye Edouard Mendy oo sharraxay sirta ka dambeysa bandhiggiisa wacan ee Kooxda Chelsea – Gool FM
Miyuu Hazard qeyb ka noqon doonaa kulanka El Clasico ee Barcelona? – Gool FM
7 hours ago Mohamoud
Jordi Alba oo ka dhaawacmay Barcelona… (Miyuu seegi doonaa kulanka El Clasico?) – Gool FM
“Qof kasta oo dhaleeceeya Ronaldo waa inuu marka hore daawadaa kulanka Atalanta” – Ole Gunnar Solskjær – Gool FM
Laascaanood:- Waxaa maanta magaalada Laascaanood lagu dilay Xaaji cabdi Mahamed…
2 mins ago Mohamoud
FGS calls on the AU Commission and AMISOM to immediately join the FGS in pursuing the finalization of the Joint CONOPs
14 mins ago Mohamoud
Muqdisho. Qodobada ay Heshiiska ka gaadheen Madaxda Dawladdu
Laascaanood:- Waxaa maanta magaalada Laascaanood lagu dilay Xaaji cabdi Mahamed… October 21, 2021
FGS calls on the AU Commission and AMISOM to immediately join the FGS in pursuing the finalization of the Joint CONOPs October 21, 2021
Mattel stock rallies as toy maker sees ‘strong’ holiday season ahead October 21, 2021
Muqdisho. Qodobada ay Heshiiska ka gaadheen Madaxda Dawladdu October 21, 2021
DEG DEG:-Madaxwayne Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Rooble oo ka heshiiyey Qodobbo… October 21, 2021